Indlela ukuziphatha ngayo ngokuqhelekileyo iQinisekiswa kuMfundi
Ootitshala Uhlalutyo lwendlela yokuziphatha
Ukuziphatha yinto abantu abayenzayo, kwaye ibonakala kwaye iyalinganiswa. Ingaba ukuhamba ukusuka kwenye indawo ukuya kwelinye okanye ukuqhuba iinqumle zomntu, ukuziphatha kusebenza uhlobo oluthile lomsebenzi.
Kwindlela yokucwaninga yokuziphatha, ebizwa ngokuba yi- Applied Behavior Analysis , umsebenzi wokuziphatha okungafanelekiyo ufunwa, ukuze ufumane ukuziphatha okutshintshileyo ukuwufaka endaweni. Yonke imimiselo isebenza umsebenzi kwaye inika umphumo okanye ukuqiniswa kokuziphatha.
Ukubonisa umsebenzi weNdlela
Xa umntu ebonisa ngempumelelo umsebenzi wokuziphatha, umntu unokunyusa enye indlela, ukuziphatha okuvunyelweneyo okuza kuyitshintsha. Xa umfundi enesidingo esithile okanye umsebenzi ozaliswe ngenye indlela, ukuziphatha kakubi okanye okungamkelekanga akunakubonakala kwakhona. Ngokomzekelo, ukuba umntwana ufuna ukunyamekela, kwaye omnye ubakhathalela ngendlela efanelekileyo ngenxa yokuziphatha okufanelekileyo, abantu banamathele ukuziphatha okufanelekileyo kwaye benze ukuziphatha okungafanelekiyo okanye okungafunekiyo kunokwenzeka ukuba kungabonakali.
Iinqununu ezithandathu eziqhelekileyo ziSebenzi zoNcedo
Ukufumana into ekhethiweyo okanye umsebenzi.
Ukuphepha okanye ukuphepha. Ukuziphatha kunceda umntwana ukuba aphunyuke kwisimo okanye umsebenzi angafunangayo.
Ukufumana ingqalelo, kubangelwa ngabantu abadala okanye oontanga.
Ukuqhagamshela. Oku kuyinyani ngakumbi kubantwana abakhubazekileyo abanciphisa amandla abo okuthetha.
Ukuzivuselela, xa ukuziphatha ngokwayo kubonelela.
Ulawulo okanye amandla. Abanye abafundi baziva bengenamandla kwaye ingxaki yokuziphatha ingabanika amandla okulawula okanye ukulawula.
I-ABA isebenzisa isichazi esilula, ngelixa i- ABC (i-Antecedent-Conduct-Consequence) ichaza iindawo ezintathu eziphambili zokuziphatha.
I-Antecedent: Imeko apho ukuziphatha kwenzeka khona kunye neemeko ezijikeleze ukuvela kwendlela yokuziphatha okanye abantu kwimeko apho ukuziphatha kwenzeka.
Indlela yokuziphatha: Indlela yokuziphatha, into eyenziwa ngumfundi ngokwenene, efuna ukuchazwa.
Isiphumo : Konke okwenzeka emva kokuziphatha, kubandakanywa nendlela abantu abaphendula ngayo ukuziphatha kunye nento eyenzekayo kwiprogram yemfundo yomfundi.
Ubungqina obucacileyo bokuthi imisebenzi yokuziphatha yomntwana ibonakala njani kwi-antecedent (A) kunye nesiphumo (C.)
Kwi-antecedent, konke kwenzeka ngokukhawuleza ngaphambi kokuziphatha. Ngamanye amaxesha kuthethwa ngokuthi "umcimbi wokumisela," kodwa umcimbi wesimo unokuthi ube yinxalenye ye-antecedent kwaye ayiyiyo yonke.
Utitshala okanye u-ABA ugqirha kufuneka abuze ukuba kukho into engakhokelela ekuziphatheni, njengokungathi ibalekele imisindo ephakamileyo, umntu ohlala ebonisa isidingo okanye utshintsho kwisimo esiqhelekileyo esinokubonakala sibethusa kumntwana. Kukho nokuba kukho into eyenzekayo kuloo ndawo ibonakala ibe nobudlelwane obuncwane, njengokungena kwentombazana enhle engayenza ingqwalasela.
Ku-ABA, umphumo wekota unentsingiselo ecacileyo, leyo ngexesha elifanayo ngaphezu kokusetyenziswa "kwesiphumo," njengoko ngokuqhelekileyo, ukuthetha "isigwebo." Isiphumo senzeke njengomphumo wokuziphatha.
Esi sihlandlo ngokuqhelekileyo "ngumvuzo" okanye "ukuqiniswa" ngokuziphatha. Cinga iziphumo ezinjengokuba umntwana esuswa ekamelweni okanye utitshala uyamxhasa kwaye anike umntwana into into elula okanye emnandi ukuyenza. Esinye isiphumo singabandakanya u titshala enomsindo kwaye eqala ukukhala. Ngokuqhelekileyo kwindlela umphumo usebenzisana ngayo nomntu onokuthi ufumane umsebenzi wokuziphatha.
Imizekelo yeeNxalenye eziPhambili zokuziphatha
Umzekelo 1: UJeremy uthathe iingubo zakhe eklasini.
Ngethuba lokuqwalaselwa okwenziweyo, lo mpilo waphawula ukuba xa ixesha lobugcisa lisondela, uJeremy uyancipha. Xa utitshala echaza, "Ixesha lokuhlambulula ukuya kwizobugcisa," uJeremy uya kuziphosa phantsi aze aqale ukukrazula ihembe lakhe. Ngoku sele ifinyelele kwindawo apho ngokukhawuleza ikhupha iisokhe kunye neengubo zakhe, ngokunjalo, ngoko iofisi iya kubiza unina ukuba amthabise ekhaya.
Umsebenzi apha ukuphepha. UJeremy akayi kuhamba kwiklasi yobugcisa. Ootitshala kufuneka baqonde ukuba nguJeremy ofuna ukuphunyuka kwizinto zobugcisa. Utitshala angaqala ukuthatha ithoyizi yakhe eyintandokazi yobugcisa kwaye engayifaki nayiphi na imfuno kuye, okanye unokufuna ukubeka iintloko zekhanda kuJeremy (igumbi linokuba likhulu kakhulu, okanye ilizwi lootitshala lingaba likhulu kakhulu.)
Umzekelo wesi-2: Umzuzu uHilary anikezelwa ngawo umfuno emva kweqela, uqala ukukrakra. Ucoca ideskiti yakhe ngokutshitshisa, ugqithise, aze aphonse phantsi. Kungekudala uye wongezelela ukubetha. Kuye kuthatha ixesha elingangeqingatha iiyure ukumthulisa, kodwa emva kokuhlasela abanye abafundi, inqununu imthumele ekhaya kunye noMama, onokuzimela yona yonke imihla.
Lo ngowomnye umsebenzi wokubaleka, nangona ngenxa yoko, omnye unokuthi uthetha ingqwalasela ngqo kuba ufumana ingqalelo engatshatangayo kuMama xa efika ekhaya. Utitshala kufuneka asebenze ngokukhawuleza ekufakeni ukuziphatha kwezemfundo, ukunika imisebenzi ekhethiweyo edeskini yakhe, kwaye uqinisekise ukuba kukho inqaku lekhaya elinceda uMama anikezele ngakumbi uHilary, kude nabazalwana bakhe, xa unomhla omkhulu.
Umzekelo wesi-3: UCarlos ungumgcini wesixhenxe ophethe i-autism ephantsi.
Ubetha intombazana xa ehamba isidlo sasemini okanye e-gym, nangona kunzima. Zibizwa ngokugqithiseleyo ngokuthi "uthando lokuhlawula." Ngamanye amaxesha uyabulala inkwenkwe enwele, kodwa ukugxila kwakhe kudla ngokuba ngamantombazana. Ngokuqhelekileyo uhlamba emva kokuba eyenzile.
Apha, umsebenzi uqwalaselwe. UCarlos uyinkwenkwe engumfana, kwaye ufuna ukuba ingqalelo yamantombazana amnandi. Kufuneka afunde ukubingelela amantombazana ngokufanelekileyo ukuze bafumane ingqalelo.
9 Iingqungquthela zeSpooky zeSamhain